Bielarosiàna mpihazakazaka haingam-pandeha, noroahan’ireo manampahefana Belarosiàna handao ny Lalao Olaimpika, milaza fa hangataka fialokalofana · Global Voices teny Malagasy
Efa nanakiana tamin'ny Instagram ireo mpanazatra azy ilay mpihazakazaka haingam-pandeha
Voadika ny 08 Aogositra 2021 15:04 GMT
i Krystsina Tsimanouskaya, mpihazakazaka haingam-pandeha, miresaka amin'ny pôlisy eo amin'ny seranampiaramanidina Haneda tao Tokyo ny 1 Aogositra 2021. Pikantsary avy amina lahatsary iray anaty tambajotran'i Reuters.
[Mitondra mankany amina pejy amin'ny fiteny rosiàna ny rohy rehetra tsy nasiana fanamarihana.]
Krystsina Tsimanouskaya, atleta belarosiàna nandray anjara tamin'ny Lalao Olaimpika Tokyo 2020, toa hoe nahazo baiko hody an-tanindrazany sy nentin'ireo manampahefana avy amin'ny fireneny an-tery hamonjy ny seranam-piaramanidina taorian'ny nanakianany ireo mpanazatra azy. Nandà tsy nety nandray ny sidina tokony hiverenany ilay mpihazakazaka haingam-pandeha ary nanambara fa ny fiverenany any Belarosia dia mety hitondra azy any am-ponja.
Nandray anjara tamin'ireo lalao fifanintsanana 100 metatra vehivavy tamin'ny 30 Jolay i Rtoa Tsimanouskaya ary tokony handray anjara amin'ireo andiana fifanintsanana 200 metatra ny 2 Aogositra, sy hazakazaka mifampitohy 4 x 400 metatra ny 5 Aogositra.
Andro vitsy lasa izay, nitaraina tao anaty lahatsoratra iray navoakany tamin'ny kaontiny Instagram ilay mpihazakazaka haingam-pandeha fa tsy nahafantatra velively hoe nosoratana handray anjara amin'ilay hazakazaka mifampitohy, tsy nanazatra tena ho amin'izany izy ary dia nokianiny ireo mpanazatra azy ho nandray fanapahankevitra tany an-damosiny tany. Avy eo dia nofafàny ireo lahatsary rehetra taorian'ny naharaisany tsindry avy amin'ireo tomponandraikitra ara-panatanjahantena belarosiàna.
Ny Alahady 1 Aogositra, araka ny voalazan-Rtoa Tsimanouskaya, tonga tao an'efitranony ireo Belarosiàna mpanazatra ary nilaza taminy mba hangorona ny entany. Avy eo izy dia nentin'ireo solontenan'ny ekipa olaimpika avy any amin'ny fireneny namonjy ny seranam-piaramanidina Haneda ao Tokyo. Araka ny voalazan'ilay Belarosiàna mpanao gazety, Hanna Liubakova, teny amin'ny seranam-piaramanidina, nandà tsy handray ny sidina ilay atleta, izay tokony handalo ao Tiorkia, ary nangataka ny fiarovan'ny pôlisy.
Tsimanouskaya notomerin'ireo mpikambana roa avy amin'ny solontena ara-panatanjahantena belarosiàna. Miaraka amin'ny pôlisy sy ireo mpirotsaka an-tsitrapo izy amin'izao fotoana izao. Rehefa nanontaniana izy raha matahotra ny handray ny sidina mankany Belarosia, “eny” no navalin'i Tsimanouskaya.
Tao anaty fampitam-baovao iray tao amin'ny Facebook, nanambara ny kaomity olaimpika belarosiàna fa noraisin'ireo mpanazatra ny fanapahankevitra hanilika an-Rtoa Tsimanouskaya tsy hilalao ny Lalao Olaimpika noho ny torohevitra naroson'ireo mpitsabo, vokatry ny “toetenany ara-pihetsehampo sy ara-tsaina”. Kanefa, nolavin'ilay atleta ny fisian'ilay fitsirihana nataon'ny mpitsabo ary nambarany tamin'ireo mpanao gazety fa nahilika izy satria nanakiana imasom-bahoaka tao amin'ny Instagram “ny antsirambina nataon'ireo mpanazatra azy”.
Tadeusz Giczan, toniandahatsoratry ny media iray tsy miankina miaina an-tsesitany, Nexta TV, dia namoaka tao amin'ny Twitter ny antso iray voarakitra tanaty lahatsary nalefan'i Tsimanouskaya avy ao amin'ny seranampiaramanidina, ary natodika ho an'ireo tomponandraikitry ny Lalao Olaimpika.
Nandrakitra antso iray i Tsimanouskaya ho an'ny CIO : “Mangataka fanampiana avy amin'ny Kaomity Iraisampirenen'ny Lalao Olaimpika aho, niharan'ny tsindry aho ary ezahan-dry zareo ny hamoaka ahy hiala eto amin'ny firenena tsy araka ny sitrapoko, noho izany mangataka ny CIO aho mba hiditra an-tsehatra.”
Araka ny fanavaozana farany nalefan'i Giczan, nanainga [ang] ny sidin'ny Turkish Airlines, saingy tsy tao anatiny ilay atleta belarosiàna, izay nijanona tao amin'ny seranam-piaramanidina, teo ambany fiarovan'ny pôlisy ary niandry ireo solontenan'ny ministeran'ny raharaham-bahiny japoney. Tao anaty antsafa iray an-telefaonina niarahana tamin'ilay belarosiàna mpanao fanatanjahantena, Tribuna, nolazain-dRtoa Tsimanouskaya fa atahorany ny ho ampidirina am-ponja rehefa tonga any Belarosia.
Matahotra aho fa rehefa any Belarosia, mety ho aiditra am-ponja aho. Tsy atahorako ny ahilika tsy handray anjara amin'ny ekipam-pirenena na horoahana. Mihevitra aho fa tsy azo antoka ho ahy ny fandehanana mankany Belarosia amin'izao fotoana izao.
Niteraka onjam-panakianana [ang] marobe avy amin'ireo mediam-panjakana belarosiàna ny hetsika nataon'ilay Belarosiàna mpihazakazaka haingam-pandeha, raha ireo mpampiasa ny media sôsilay sy ireo fikambanana sivily kosa nijoro nanohitra ny tsindry nataon'ny fanjakàna tamin'ireo atleta.
Amin'ny 1ora 15mn izao eto Tokyo. Vao avy nivoaka ny biraon'ny pôlisy ao amin'ny seranam-piaramanidina mihitsy i Tsimanouskaya. Nentina namonjy “toerana iray azo antoka” izy, izay tsy nolazaina – araka ny voalazan'ny media japôney @SportsHochi. Mbola tànany hatrany ny faniriany hangataka fialokalofana, saingy tsy mbola misy antsipirihany azo aloha hatreto.
Ny mpitondrateny iray avy amin'ny Orina Firaisankina ho an'ny Fanatanjahantena Belarosiàna [ang], fikambanana iray manohana ireo atleta belarosiàna nofonjaina na iharan'ny tsindry noho ny fanehoankevitra pôlitikan-dry zareo, dia nanambara [ang] tamin'ny Reuters fa hetahetan-dRtoa Tsimanouskaya ny hangataka fialofana any Alemaina na Aotrisy.
Marobe ireo atleta belarosiàna nanohana ireo hetsipanoherana nifanesinesy an'ireo fifidianana ho filohampirenena feno hosoka amin'ny Aogositra 2020 tao amin'ny fireneny no voasambotra, naiditra am-ponja na nahilika tsy ho ao anatin'ny ekipam-pirenena. Anisan'ireo olomalaza amin'izao fotoana izao ilay mpilalao baskety olaimpika, Yelena Leuchanka, ary ilay mpanao décathlon, Andreï Krauchanka.
Nambaran'ny Kaomity Olaimpika Iraisampirenena (CIO), izay mitantana ireo Lalao Olaimpika, fa fantany ireo vaovao rehetra nampitain'ireo media ary nohamafisiny fa eo am-pandinihana ny tranga mahazo an-dRtoa Tsimanouskaya. Tao anaty bitsika iray, ilay mpitarika ny fanoherana, Sviatlana Tsihanouskaya, dia niarahaba ny fihetsiky ny CIO ary nanambara fa zavadehibe ny hampanaovan'ny kaomity olaimpika belarosiàna fanadihadiana momba ny fanitsakitsahana ny zon'ireo atleta.
Ankasitrahana ny #CIO noho ny fihetsehany haingana nanoloana ny raharaha mahakasika ilay atleta belarosiàna, Krystsina Tsymanouskaya. Zony ny hahazo fiarovana iraisampirenena sy hanohy ny fandraisany anjara amin'ireo Lalao. Tena zavadehibe ihany koa ny hanaovan'ny CNO belarosiàna fanadihadiana momba ny fanitsakitsahana ny zon'ireo atleta.